ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးတွေလို မျက်နှာမျိုး ဖြစ်စေမယ့် Snow – AR Camera – AsiaApps
April 24, 2018 April 24, 2018 MoonReviewsNo Comment on ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးတွေလို မျက်နှာမျိုး ဖြစ်စေမယ့် Snow – AR Camera
လှပတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကပဲ စစ်မှန်တဲ့ အမှတ်တရတွေကို သိမ်းဆည်းပေးနိုင်တာကြောင့် ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာအသစ် တစ်ခုဆီရောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးလုပ်မိကြတာက ဓာတ်ဖမ်းတာပါပဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အပြင်ကရုပ်ထက် ကင်မရာထဲက ရုပ်ကို ပိုလှစေချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရုပ်ဆိုးနေရင် ဓာတ်ဖမ်းချင်စိတ် အော်တိုပျောက်တာ။ ?)
Snow – AR ကင်မရာ app က 360 တို့ B612 တို့လိုပါပဲ။ Effects တွေတစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် မျက်နှာက ဘယ်အချိန် ဓာတ်ဖမ်းဖမ်း ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေလိုဖြစ်နေမှာပါ။ (အပြင်ကရုပ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ?)
တကယ်တမ်းသေချာယှဉ်ပြီးသုံးကြည့်ရင် မင်မင်ကတော့ Snow – AR ကင်မရာကို ပိုကြိုက်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ effects တွေ က B612 လိုမျိုး အမှုန်အပျောက်တွေ သိပ်ပြီး မပါပါဘူး။ 360 လိုမျိုး အရမ်းကြီးလည်း ဖြူစုတ်မနေပါဘူး။ မျက်နှာက ပြောင်ပြောင်နဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင်လေး ဖြစ်နေမှာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Effects သုံးလို့ သုံးထားမှန် မသိသာဘူးပေါ့နော်။ အဲ့အချက်ကပဲ အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်နေတာပါ။
ခုမှစသုံးတဲ့သူဆိုရင် ပထမဆုံး log in လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Facebook နဲ့လား ၊ Line နဲ့ လား Phone နံပါတ်နဲ့လား ဆိုပြီးရွေးချယ်ခိုင်းမှာပါ။ မင်မင်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပဲ log in လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Log in မလုပ်ချင်ရင်လည်း Skip လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။
Snow AR ကင်မရာထဲမှာ နောက်ထပ် တစ်ခုကြိုက်နှစ်သက်မိတာက စတစ်ကာတွေပါ။ စတစ်ကာပုံစံတွေက တော်တော်လေးကို ရွေးချယ်စရာများပါတယ်။ အားလုံးကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လိုင်းဖွင့်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ စတစ်ကာတွေထဲမှာ တစ်ခုသတိထားမိတာက တောင်ကိုရီးယား Kpop အဖွဲ့BTS ရဲ့ စတစ်ကာလေးတွေလည်း ပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ စတစ်ကာလေးတွေနဲ့ တွဲပြီး ဓာတ်ပုံအတူတူ ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ BTS fans တွေအတွက် သတင်းကောင်းပေါ့နော်။ သူတို့တွေတင်မကသေးပါဘူး။ စိတ်ပါရင် အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေနဲ့ music video တွေပါလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
အသုံးပြုလို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် cute effects တွေ နှစ်သက်တဲ့ မမတို့ စမ်းကြည့်သင့်တယ်နော်။ App Store နဲ့ Play Store တို့မှာ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။